သြစတေးလျ တောမီးလောင်ပြင်ကြားမှာ အထိအခိုက် အပျက်အစီး လုံးဝမရှိဘဲ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကျန်ရှိနေခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း. . - Myanmar People Alliance
သြစတေးလျ တောမီးလောင်ပြင်ကြားမှာ အထိအခိုက် အပျက်အစီး လုံးဝမရှိဘဲ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကျန်ရှိနေခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း. .
တစ်ခါတလေမှာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်တွေက စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးထားတာတွေထက် ပိုပြီးအံ့သြသင့်ဖွယ်ဖြစ်ကာ မယုံနိုင်စရာကောင်းလွန်းလှအောင် ဆန်းကြယ်လွန်းလှပါတယ်။
ဩစတေးလျမှာ တောမီးလောင်ကျွမ်းမှု ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပေမယ့် အခုနှစ်မှာတော့ အရင်နှစ်တွေကထက်စောပြီး တောမီးလောင်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ ဆုံးရှုံးထိခိုက်မှုတွေလည်း အတော်များခဲ့ပါတယ်.။
သြစ​တေးရီးယားနိုင်ငံ၏ သ​င်္ကေတဖြစ်သည့် ခိုအားလား အ​ကောင်ငယ်​လေး​ပေါင်း ၈၀၀၀​ကျော် မီး​လောင်ကျွမ်း​သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူ တိရိစ္ဆာန်မျိုးစုံ သန်းနဲ့ချီပြီး​သေဆုံးပြီဟု သိရှိရပြီး..ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရမှုမှာ..
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းခဲ့သော တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် မြေဧကပေါင်း သိန်း ၁၆၀၀(၁၆၀, ၀၀၀, ၀၀၀)ခန့် မီးသင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး၊
အဆောက်အအုံပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် မီးသင့်ခဲ့ကာ၊လူ ၂၅ ဦးခန့် သေဆုံးပြီး၊ ၇ဦးဝန်းကျင်ပျောက်ဆုံးလျှက်ရှိကြောင်းသိရပြီး ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တိရစ္ဆာန်ပေါင်း ဘီလျံဝက်(သန်း ၅၀၀ ခန့်)သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်း သြစတြေးလျက တောမီးကြောင့် အိမ်တွေမီးလောင်တာတွေ သန်းနဲ့ချီတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ သေကြေပျက်စီးကြတဲ့ပုံတွေကိုလည်း ပရိသတ်ကြီးတို့ တွေ့မိမှာပါ….တချို့ဓာတ်ပုံလေးတွေဆို ကြည့်ပြီး မျက်ရည်တောင်ကျရပါတယ်…
အဲဒီလို ဟက်တာပေါင်း သောင်းသိန်းချီလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့တောမီးကြောင့် တိရစ္ဆာန်တွေ သစ်ပင်တွေ သန်းချီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပေမယ့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် မီးလုံးဝမလောင်တဲ့နေရာတစ်ခု ကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်…
အဲတာကတော့ ဩစတေးလျနိုင်ငံ တောမီးကြားထဲမှာ မယုံနိုင်စရာကောင်းလွန်းလှအောင် လုံးဝ အပျက်အစီး အထိအခိုက် မရှိ၊မီးလုံးဝ လောင်ကျွမ်း ခြင်းမရှိဘဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း ကျန်ရှိခဲ့တာပါ….
အဲဒီကျောင်းကတော့ ကျွန်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ သြစတေးလျမှ သာသနာပြုပြီး တောထဲမှာ တရားဘာဝနာပွားများကာ သီတင်းသုံးကျင့်ကြံနေတဲ့ ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်….
ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် အားလုံးက အံ့အားသင့်နေကြတာဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ ထူးခြားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေနဲ့ ကျောင်းတိုက်မှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်ကြသော ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ သီလ သမာဓိတွေကြောင့် ယခုလို အပျက်အစီးမရှိ ကျန်ရှိနေခဲ့တာလို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလောက်အကြီးအကျယ် လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ တောမီးကြားထဲမှာ မီးလုံးဝမလောင်ဘဲကျန်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ ထူးဆန်းလွန်းလှပြီး တကယ့်ကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလွန်းလှပါတယ်နော်။
ဒီအကြောင်းဟာ နိုင်ငံတကာ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက် (အွန်လိုင်းပေါ်မှာ) အထူးအဆန်းဖြစ်ရပ်အဖြစ် ပျံ့နှံ့ပြီး နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရွှေမြန်မာတို့လည်း ဒီအကြောင်းလေးကို သိရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်…အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ…
တဈခါတလမှော တကယျ့ဖွဈရပျတှကေ စိတျကူးယဉျဖနျတီးထားတာတှထေကျ ပိုပွီးအံ့သွသငျ့ဖှယျဖွဈကာ မယုံနိုငျစရာကောငျးလှနျးလှအောငျ ဆနျးကွယျလှနျးလှပါတယျ။
ဩစတေးလမြှာ တောမီးလောငျကြှမျးမှု ပုံမှနျဖွဈလရှေိ့ပမေယျ့ အခုနှဈမှာတော့ အရငျနှဈတှကေထကျစောပွီး တောမီးလောငျမှုတှေ ဖွဈပျေါလာခဲ့တာ ဆုံးရှုံးထိခိုကျမှုတှလေညျး အတျောမြားခဲ့ပါတယျ.။
သွစတေးရီးယားနိုငျငံ၏ သင်ျကတေဖွဈသညျ့ ခိုအားလား အကောငျငယျလေးပေါငျး ၈၀၀၀ကြျော မီးလောငျကြှမျးသဆေုံးခွငျးနှငျ့အတူ တိရိစ်ဆာနျမြိုးစုံ သနျးနဲ့ခြီပွီးသဆေုံးပွီဟု သိရှိရပွီး..ထုတျပွနျခကျြအရ သိရှိရမှုမှာ..
သွစတွေးလနြိုငျငံတှငျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ စကျတငျဘာလမှ စတငျလောငျကြှမျးခဲ့ပွီး ယခု ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဇနျနဝါရီလအထိ ဆကျလကျလောငျကြှမျးခဲ့သော တောမီးလောငျကြှမျးမှုကွောငျ့ မွဧေကပေါငျး သိနျး ၁၆၀၀(၁၆၀, ၀၀၀, ၀၀၀)ခနျ့ မီးသငျ့လောငျကြှမျးခဲ့ပွီး၊
အဆောကျအအုံပေါငျး ၂၅၀၀ ကြျော မီးသငျ့ခဲ့ကာ၊လူ ၂၅ ဦးခနျ့ သဆေုံးပွီး၊ ၇ဦးဝနျးကငျြပြောကျဆုံးလြှကျရှိကွောငျးသိရပွီး ခနျ့မှနျးခွအေားဖွငျ့ တိရစ်ဆာနျပေါငျး ဘီလြံဝကျ(သနျး ၅၀၀ ခနျ့)သဆေုံးခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။
လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှောလညျး သွစတွေးလကြ တောမီးကွောငျ့ အိမျတှမေီးလောငျတာတှေ သနျးနဲ့ခြီတဲ့ တိရစ်ဆာနျလေးတှေ သကွေပေကျြစီးကွတဲ့ပုံတှကေိုလညျး ပရိသတျကွီးတို့ တှမေိ့မှာပါ….တခြို့ဓာတျပုံလေးတှဆေို ကွညျ့ပွီး မကျြရညျတောငျကရြပါတယျ…
အဲဒီလို ဟကျတာပေါငျး သောငျးသိနျးခြီလောငျကြှမျးခဲ့တဲ့တောမီးကွောငျ့ တိရစ်ဆာနျတှေ သဈပငျတှေ သနျးခြီပကျြစီးဆုံးရှုံးခဲ့ပမေယျ့ အံ့သွဖှယျကောငျးလောကျအောငျ မီးလုံးဝမလောငျတဲ့နရောတဈခု ကနျြရှိခဲ့ပါတယျ…
အဲတာကတော့ ဩစတေးလနြိုငျငံ တောမီးကွားထဲမှာ မယုံနိုငျစရာကောငျးလှနျးလှအောငျ လုံးဝ အပကျြအစီး အထိအခိုကျ မရှိ၊မီးလုံးဝ လောငျကြှမျး ခွငျးမရှိဘဲ ဘုနျးကွီးကြောငျးတဈကြောငျး ကနျြရှိခဲ့တာပါ….
အဲဒီကြောငျးကတော့ ကြှနျးတှနေဲ့ တညျဆောကျထားတာဖွဈပွီးတော့ သွစတေးလမြှ သာသနာပွုပွီး တောထဲမှာ တရားဘာဝနာပှားမြားကာ သီတငျးသုံးကငျြ့ကွံနတေဲ့ ထိုငျးဗုဒ်ဓဘာသာ ဘုနျးကွီးကြောငျးပဲဖွဈပါတယျ….
ဒီအဖွဈအပကျြကွောငျ့ အားလုံးက အံ့အားသငျ့နကွေတာဖွဈပွီး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှကေတော့ ထူးခွားတဲ့ မွတျစှာဘုရားရဲ့ ဂုဏျကြေးဇူးတှနေဲ့ ကြောငျးတိုကျမှာ သီတငျးသုံးနထေိုငျကွသော ဘုနျးတျောကွီးတှရေဲ့ သီလ သမာဓိတှကွေောငျ့ ယခုလို အပကျြအစီးမရှိ ကနျြရှိနခေဲ့တာလို့ ယုံကွညျနကွေပါတယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဒီလောကျအကွီးအကယျြ လောငျကြှမျးခဲ့တဲ့ တောမီးကွားထဲမှာ မီးလုံးဝမလောငျဘဲကနျြခဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြဟာ ထူးဆနျးလှနျးလှပွီး တကယျ့ကို အံ့အားသငျ့ဖှယျကောငျးလှနျးလှပါတယျနျော။
ဒီအကွောငျးဟာ နိုငျငံတကာ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျ (အှနျလိုငျးပျေါမှာ) အထူးအဆနျးဖွဈရပျအဖွဈ ပြံ့နှံ့ပွီး နာမညျကွီးနပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျရှမွေနျမာတို့လညျး ဒီအကွောငျးလေးကို သိရအောငျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျရပါတယျနျော…အားလုံးကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ…